1 Samueri 30 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Bhuku Rekutanga raSamueri 30:1-31
VaAmareki vanopamba Zikragi voipisa (1-6)
Dhavhidhi anowana simba kuna Mwari (6)
Dhavhidhi anokunda vaAmareki (7-31)
Dhavhidhi anodzosa vanhu vanga vatapwa (18, 19)
Mutemo waDhavhidhi pazvinhu zvinenge zvapambwa (23, 24)
30 Dhavhidhi nevarume vake pavakasvika kuZikragi+ pazuva rechitatu, vaAmareki+ vakanga vapamba kumaodzanyemba* nemuZikragi, uye vakanga varwisa Zikragi, vakaipisa nemoto. 2 Vakanga vatapa vakadzi+ nevanhu vese vaiva mairi, kubvira kuvadiki kusvikira kuvakuru. Hapana wavakauraya, asi vakavatora vakaenda. 3 Dhavhidhi nevarume vake pavakasvika kuguta racho, vakawana rapiswa nemoto, uye madzimai avo nevanakomana vavo nevanasikana vavo, vakanga vatapwa. 4 Saka Dhavhidhi nevarume vaaiva navo vakatanga kuchema vachiridza mhere kusvikira vasisina simba rekuchema. 5 Madzimai maviri aDhavhidhi akanga atapwawo, Ahinoamu wekuJezreeri naAbhigairi chirikadzi yakasiyiwa naNabhari wekuKameri.+ 6 Dhavhidhi akanetseka chaizvo, nekuti varume vake vaitaura kuti vaida kumutema nematombo, nekuti varume vese vakanga vagumbuka chaizvo nemhaka yekutorwa kwakanga kwaitwa vanakomana nevanasikana vavo. Asi Dhavhidhi akazvisimbisa naJehovha Mwari wake.+ 7 Dhavhidhi akabva ati kumupristi Abhiyatari,+ mwanakomana waAhimereki: “Ndapota uya pano neefodhi.”*+ Saka Abhiyatari akaenda neefodhi yacho kuna Dhavhidhi. 8 Dhavhidhi akabvunza Jehovha+ kuti: “Nditevere boka iri revapambi here? Ndichavabata here?” Iye akabva ati kwaari: “Vatevere, nekuti chokwadi uchavabata, uye uchanunura vanhu.”+ 9 Dhavhidhi akabva angosimuka nevarume 600+ vaaiva navo, uye vakaramba vachienda vakasvika kuRwizi* rweBhesori, vamwe varume vakasara ipapo. 10 Dhavhidhi akaramba achitevera nevarume 400, asi varume 200 avo vakanga vaneta zvekusagona kuyambuka Rwizi* rweBhesori vakasara.+ 11 Vakawana mumwe murume wekuIjipiti musango uye vakaenda naye kuna Dhavhidhi. Vakamupa zvekudya nemvura yekunwa, 12 nechimedu chekeke remaonde akaomeswa nemakeke maviri emazambiringa akaomeswa. Paakadya, akawanazve simba* nekuti akanga asina kudya chinhu kana kunwa mvura kwemazuva matatu neusiku hutatu. 13 Dhavhidhi akabva amubvunza kuti: “Uri muranda waani, uye unobvepi?” iye akati: “Ndiri muIjipiti, muranda wemumwe murume muAmareki, asi tenzi wangu akandisiya nekuti ndakarwara mazuva matatu apfuura. 14 Takapamba kumaodzanyemba* kwevaKereti,+ uye munyika yeJudha nekumaodzanyemba* kwaKarebhi,+ tikapisa Zikragi nemoto.” 15 Dhavhidhi akabva ati kwaari: “Uchanditungamirira kune boka iri revapambi here?” Iye akapindura kuti: “Kana mukapika naMwari kwandiri kuti hamuzondiurayi uye kuti hamuzondiisi mumaoko atenzi vangu, ndichakutungamirirai kuboka iri revapambi.” 16 Saka akamutungamirira kuenda kwavaiva, kwavainge vakapararira munzvimbo yacho yese vachidya nekunwa uye vachipemberera nemhaka yezvinhu zvakawanda zvavakanga vapamba munyika yevaFiristiya nenyika yeJudha. 17 Dhavhidhi akabva avauraya kubvira pakutsvuka kweutonga kusvikira manheru; hapana murume akapona+ kunze kwevarume 400 vakatiza vakatasva ngamera. 18 Dhavhidhi akadzosa zvese zvakanga zvatorwa nevaAmareki,+ uye Dhavhidhi akanunura madzimai ake maviri. 19 Hapana chavo chavakashaya, chingava chidiki kana chikuru. Vakanunura vanakomana nevanasikana vavo nezvinhu zvakanga zvapambwa.+ Dhavhidhi akadzosa zvinhu zvese zvavakanga vatora. 20 Saka Dhavhidhi akatora makwai ese nemombe, vakazvitinha zviri pamberi pezvipfuwo zvavo. Vakati: “Izvi ndizvo zvinhu zvapambwa naDhavhidhi.” 21 Dhavhidhi akabva asvika kuvarume vaya 200 vakanga vaneta vakatadza kuenda naDhavhidhi vachibva vasara paRwizi* rweBhesori,+ uye varume vacho vakabuda kuzosangana naDhavhidhi nevanhu vaaiva navo. Dhavhidhi paakasvika pedyo nevarume vacho, akavabvunza kuti vakanga vakadii. 22 Zvisinei, varume vese vakaipa nevarume vasingabatsiri pavarume vakanga vaenda naDhavhidhi vakati: “Havana kuenda nesu, saka hapana chatiri kuzovapa pazvinhu zvakanga zvapambwa zvatakanotora asi mumwe nemumwe ngaangotora mudzimai wake nevanakomana vake aende.” 23 Asi Dhavhidhi akati: “Hamufaniri kudaro nezvinhu zvatapiwa naJehovha hama dzangu. Atichengeta, akaisa boka revapambi rakauya kuzotirwisa muruoko rwedu.+ 24 Ndiani angabvumirana nemi pazvinhu zvakadaro? Mugove weakaenda kunorwa uchafanana neweuya akasara nenhumbi.+ Vese vachawana mugove wakaenzana.”+ 25 Uye kubvira pazuva iroro zvichienda mberi akaita kuti uve murau uye mutemo kuvaIsraeri kusvikira nhasi. 26 Dhavhidhi paakadzokera kuZikragi, akatumira vakuru veJudha vaiva shamwari dzake zvimwe zvinhu zvavainge vapamba, achiti: “Torai chipo* chenyu icho chabva pane zvakapambwa kuvavengi vaJehovha.” 27 Akachitumira kune vaya vaiva muBheteri,+ nevaya vaiva muRamoti yekuNegebhu,* nevaya vaiva muJatiri,+ 28 nevaya vaiva muAroeri, nevaya vaiva muSifmoti, nevaya vaiva muEshtemoa,+ 29 nevaya vaiva muRakari, nevaya vaiva mumaguta evaJerameeri,+ nevaya vaiva mumaguta evaKeni,+ 30 nevaya vaiva muHoma,+ nevaya vaiva muBhorashani, nevaya vaiva muAtaki, 31 nevaya vaiva muHebroni,+ nekunzvimbo dzese dzaigara dzichiendwa naDhavhidhi nevarume vake.
^ Kana kuti “kuNegebhu.”
^ ChiHeb., “mweya wake wakadzokera maari.”
^ Kana kuti “nekuNegebhu.”
^ ChiHeb., “chikomborero.”
1 Samueri 30